Dabaal degga ciida Kiristaanka (Jul) | Somaliska
Maanta oo taariikhdu tahay 25 December waa dabaaldegga maalinta Juulka ama Christmas ee loo yaqaan (Juldagen) taasoo balaayiin ka mid dadka caalamka ay u dabaal dagaan dhalashadii nabi Ciise (nnkh) inkastoo taariikhdu cadeysay in uusan dhalan maalintaan. Dabaaldegga Juulka ayaa la aaminsanyahay in uu ka soo jeedo caadooyinkii dadkii cawaanta ahaa ee ka horeeyay Kiristaanka.
Arinka yaabka leh ayaa ah in dad badan oo aan Kiristaan ahayn oo ay ku jiraan Muslimiin ay ka qeyb qaataan dabaal degga ciidaan. Qaar badan ayaa ku dooda in Kirismasku uusan hada ahayn dabaaldegg diimeed ee uu noqday mid caalami ah. Hadaba waa maxay sababta ay dadkaas uga qeybqaataan barnaamij ka soo horjeeda diintooda?
Fikradaada ku darso…
Shir loogu magac darray “Cafis”oo lagu qabanayo magaaladda Turku ee Finland
Waa wax laga naxo dad islaama inay uu dabaldagaan wax diintooda iyo caqidadoda dhawacaya markaa illahow xaqa garansiii
asc oo walalo jimcale hadayi iguu yidhah daan good jul maxan kuu irahda maa naagatag good juul lahane gudo gariire
God jul, Qofkii aan rabin muxuu kasamaynayaa meeshaan, muu aado meel aam laga aqoon happy chrismas.
Muslim markaad aragto waa colaad socota.
uga taga dalkooda marka.
December 28, 2014 at 17:17
Dod Jul ma rabneee ilahay imaanka ha ku so ceeliyo
Haddii ay saas tahay maxaan cayrta u qaadannaa illeen waan ognahay in xataa hilibka qansiirka la cashuuree iyo qamrada kuwa khaniisiinta ahe.
Asc jimcaale waa jibkaaki waa kudatay ilaahey hagu dhoro waxa tahay ruux noo dadaalay wax naga qarsoona ayaa daaha ka rogtay waxan islaam eheen haga xanaaqan ama yeysa ka xanaaqin wixi xaqa waa la sheegi inta leysla noolyahay insha allah